Kaga baradhada naftaada - PotatoSystem
Meey 27, 08:00
в Wararka gobolka, Dhaqaalaha iyo falanqaynta
Dhinacyada oo dhami, caasimada Komi waxaa ku hareereysan aqalada xagaaga, iyo muwaadiniinta badankood waxay u isticmaalaan dhulka ujeedadooda loogu talagalay - halkaas ayey ku beero khudaarta iyo baradhada. Tifatirayaasha BNK waxay go’aansadeen inay xisaabiyaan waxa ka jaban - ka iibsato barandho dukaan ama ku koraan dalka.
Waxaa ka mid ah doodaha ugu weyn ee dadka deggan xagaaga - baradhada u gaarka ah ayaa leh dhadhan fiican. Cidina kuma doodo arintan - midka la iibsaday had iyo jeer si uun buu uga sii daraa. Dood kale - shaqadaada looma tixgalin doono, runti shaki la'aantan waxaa badanaa laga maqli karaa wakiilada jiilka da'da weyn. Oo bannaanka u dhow waligiis ma la yaabanahay inta dalagga runtii iyaga ku kacayaan. Waxaan go'aansanay inaan iyaga u samayno. Si dhakhso leh u samee Boos celis in dhammaan xisaabinta ay yihiin kuwo aan sabab lahayn. Laakiin deggane kasta oo xagaaga ah, tusaale ahaan, wuxuu xisaabin karaa celceliska qiimaha kiilogaraam ee baradho ah, isagoo raacaya qorshaheenna.
Xisaabinta, waxaan ku soo qaadannay qol laba boqol ah.
Baradhadu ayaa la beeray dabayaaqadii May - horraantii Juun, qaadashada - ilaa badhtamaha Sebtember. Taasi waa, waxaad u baahan tahay inaad ka soo muuqatid guriga aqalada ugu yaraan shan bilood si aad ugu diyaar garowdid goobta, baradhada dhirta, haramaha, kuleylka, xagaaga kulul, laga yaabee xitaa biyo dhowr jeer, soo qaado lamid ah Colorado, gooya inflorescences (qaar ka mid ah dadka deegaanka xagaaga ayaa qaba in tani ay kordhineyso dhalidda) . Ka soo qaad in waxaas oo dhan lagu samayn karo toban safar.
Hadaad ku raacdo bas, waa inaad lacag ka bixisaa 480 si ay u 600 Ruqsadda (waxay kuxirantahay wadada, qiimaha tigidhada iyo qiima dhimista). Waa in sidoo kale la tixgeliyaa in baradhada abuurku ay ahaan doonaan in loo keeno goobta si uun - ha weydiinin qaraabada ama kuwa aad isla garataan, ama gaari kiraysato. Waan u jiifsan doonaa 200 Ruqsaddain kasta oo qaddarku aad u sarreeyo.
Gaariga wuu ka qaalisan doonaa. Waxay kuxirantahay masaafada, kharashyada waxay noqon doonaan qiyaastii 1000 Ruqsaddahaddii aqalku u dhow yahay magaalada, iyo 4000 RUB iyo wixii ka sareeya haddii ay tahay inaad u safarto meel fog, tusaale ahaan, laga bilaabo Orbit illaa Myrty-u.
Boqolkiiba boqol waxaad u baahan tahay qiyaastii 100-200 kiilo oo digada wasakh ah ama qashin (qaar ayaa kugula taliyaya ku dar 300). Dabcan, bacriminta laguma iibin kilo kiilo - waa inaad dalbataa gaari xamuul ah. Dhammaantood waxay ku kacayaan lacag aad u badan, qiimaha ayaa gaari kara 4000 RUB iyo inbadan. Way iska cadahay in dhammaan digada, peat ama qashinku ay gali doonin baradhada, sidaa darteed, u malaynayaan in dhulka lagu aasi doono laga bilaabo 1000 ilaa 1500 rubles.
Tan waxaan u baahan nahay inaan ku darno Bacriminta kala duwan, kicinta kobcinta, daaweynta cudurrada iyo cayayaanka - 500 RUB.
Dabcan, marwalba waxaa jira fursad lagu helo dadka diyaarka u ah inay gacan ku ridaan beerta dhowr dhalo oo vodka ah (kharashyadu waa qiyaas ahaan 300 RUB). Maamulayaasha xirfadleyda ah (iyo qaar ka mid ah aaggan) ayaa wax badan weydiya - qiimaha ayaa kor u kici kara 1000 RUB boqol mitir oo laba jibaaran (iyo 2000 rubles laba laba). Goobaha lagu dhawaaqayaa waxaa ka buuxa farriimo ku saabsan ku qodidda dhulka leh cagaf-yar, cagaf-lugo gadaal ama beerale. Qiimuhu waa isku mid - 700-800 rubles boqol mitir oo laba jibaaran, taasi waa 1400-1600 Rug laba boqol oo qaybood.
Inta badan deggeneyaasha xagaaga ayaa wax walba kaligood sameeya, iyaga oo aaminsan in shaqadoodu aysan u tarjumaynin lacag gabi ahaanba. Waan u samayn doonnaa iyaga. Waa tan waqtiga aad ku bixineysid:
- goynta - 8 saacadood;
- degid - 4 saacadood;
- jaridda dhirta - 8 saacadood;
- buuraha - 6 saacadood;
- goosashada - 8 saacadood.
Wadarta 34 saacadood ayaa soo baxday. Laakiin halkan waxaad ku dari kartaa 8 saacadood oo kale oo waraabinta, aruurinta cayayaanka, jaridda dhirta dheeriga ah. Intaa waxaa sii dheer, qof walbana si dhakhso leh uma shaqeeyo, markaa waxaan xisaabta ku daraynaa khaladaadka noocyada shaqo oo dhan 8 saac. Waxaan xisaabeynaa saacadaha shaqada lacag ahaan. Celceliska mushaharka Syktyvkar ee dhaqaalaha marka loo eego xogtii ugu dambeysay ee Kominat waa 52 kun rubles bishii. Bil gudaheeda - 160 saacadood oo shaqo ah. Taasi waa, isku celceliska qiimaha dadka deggan magaalada waa 325 rubles saacaddii. Waxaan ku dhufaneynaa waqtiga aan ku bixineyna waxaan heleynaa in daryeelka baradhoku uu qaali ku yahay dadka deegaanka xagaaga 11050 si ay u 16250 RUB.
Kharashaadka dheeriga ah
Bannaanka u soo baxa ayaa kugula talinaya cusboonaysiinta barandhada sanad walba. Iyada oo ku xidhan noocyada kala duwan, kiilogaraam kiilo beero ayaa qiimihiisu ahaa 90 ilaa 160 rubles. Haddii aad qaadatid saddex kiilogaraam, markaa kharashaadka ayaa ka imaan doona 270 si ay u 480 RUB.
Beerista, beero iyo goynta waa shaqo adag, qof walbana uma dulqaadan karo. Sidaa daraadeed, waxaa lagama maarmaan ah in la bixiyo kharashaadka kuleylka kareemka ah, kuwa xanuun joojiya iyo dawooyinka kale si loo soo celiyo caafimaadka. Aynu dhahno waa inaad ku kharash gareeysaa 200 si ay u 500 RUB.
Waxay u badan tahay, majarafadaha, roogagga, basbaasleyda iyo tuullooyinka horaa loo hayaa. Laakiin waxaad u baahan doontaa, tusaale ahaan, galoofyada. Guri dhan 100 RUB.
Komi waxaa loo xilsaaray dhul beereedka khatarta leh: oomane iyo kuleyl kulul waxaa lagu beddeli karaa roob iyo qabow, mararka qaarkood qabow ayaa dhaca xitaa horaanta July. Sidaa darteed, dhalidda baradhada ee gobolka waxay u dhaxayn kartaa 180 ilaa 70 centi halkii hektar. Iyada oo ku saleysan xogta muddada-dheer ee Komistat, celcelis ahaan soosaarka baradho ee jamhuuriyadda waa 120 sentimitir halkii hektar, taas oo ah, 12000 kiilo garaam 100 hektar, i.e. 240 kiilo garaam 2 hektar.
Haddii aad qaadatid inta ugu yar (bas raac, soo iibsato digada xoolaha, wax walba samee naftaada oo aadan lacag ku bixin wax dheeraad ah), markaa qarashaadka ayaa noqon doona 12,5 kun rubles. Markaa, hal kiilogaraam oo baradho ah oo qiimihuna ayaa ku kacaya qof deggan xagaaga Roobka 52. Haddii aad isticmaasho gaari, markaa “qiimaha” baradhoku wuxuu ku kacayaa 2-15 rubles halkii kiilo.
Haddii aadan keydin (baabuur wadin, soo iibsato baradho abuur, digada, bacriminta, aaladaha, daawooyinka), markaa kharashaadka ayaa noqon doona 21,8 kun rubles, qiimaha hal kilo oo baradho ah ayaa ku dhow. 91 ruble.
Soo iibso baradhada
Hadda Syktyvkar bakhaarradu waa kiiloogaraam oo baradho rakhiis ah oo loo iibsan karaa 26 RUB. Shisheeye (ka yimid Azerbaijan) kharashyada Roobka 72. Qiimaha celcelis ahaan waa 36 ilaa 45 rubles. Xilliga deyrta, marka ay jirto khudradda xad dhaafka ah, waxaad ka heli kartaa baradhada dukaannada 20 RUB halkii kiilogaraam
Tags: Qiimaha baradhada la beeroSyktyvkar